Success Businessman လျှို့ဝှက်ချက် ၅ ခု
Jun 24,2018 view 642
Jun 24,2018 view 2554
အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် ၅ ခု
ကျွန်တော်က အသက် ၁၇ ပါ။ ကျွန်တော့် အထက်တန်းကျောင်း ပညာရေး အကြံပေးရှေ့မှာ ထိုင်နေပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ဘဝနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဘယ်လို ဆက်လုပ်ချင်လဲ မေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာမှ မသိပါဘူး။
“မင်းဘာကို စိတ်ထဲက နှစ်နှစ်ကာကာ စိတ်ဝင်စားလဲ” သူမမေးပါတယ်။ အခန်းကတော့ တိတ်ဆိတ်လျက်ပါပဲ။ ပြောချင်တာကတော့ ဂိမ်းဆော့ချင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် မသိပါဘူး။ သူမကပြောပါတယ်။ ” အရေးကြီးဆုံးကတော့ မင်းနှလုံးသားအတိုင်း လုပ်သွားဖို့ပဲ“
အဲဒါကို ထပ်ခါထပ်ခါ ကြားရလွန်းနေပါပြီ။ မိဘတွေ၊ ဆရာတွေ၊ ဂိုက်တွေ၊ အားလုံးက အဲလို ပြောခဲ့ကြတာပါ။ မင်း ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရာကို လုပ်ပါ။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါက မလွယ်ကူပါဘူး။ လုပ်ငန်းရှင်လောင်းတွေအတွက် အကြီးမားဆုံး အခက်အခဲကတော့ ဘာကို စိတ်ဝင်စားမှန်း မသိတာပါပဲ။ စိတ်ဝင်စားတာကို သိရင်လဲ ဘဝအခက်အခဲကြားမှာ ရည်မှန်းချက် ပျောက်မသွားဖို့ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိတာပါပဲ။
၁. သင့်ရည်မှန်းချက်တွေ သင့်ဆီလာပါစေ
တချို့လူတွေဟာ သူတို့လုပ်ချင်တဲ့အရာကို ငယ်ငယ်ကတည်းက စိတ်ဝင်တစား လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လောင်း အများအပြား ကတော့ နေရာမျိုးစုံမှာ စိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်။ Steve Jobs က Apple မထောင်ခင် အိန္ဒိယမှာ စိတ်ပညာလေ့လာရင်း ဆာဒူးဝတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကျွန်တေယ်ဆို ကောလိပ်မှာ စီးပွားရေးပညာ သင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြို့ပြန်ပြီး ပီဇာဆိုင် ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတာ ပီဇာ မဟုတ်ပဲ Marketing ဖြစ်ကြောင်း နှစ်အတော်ကြာမှ သိခဲ့တာပါ။ အဲဒါကြောင့် သင်လဲ ရည်မှန်းချက် မသိသေးရင် အေးအေးဆေးဆေး ဘဝအတွေ့အကြုံ ယူလိုက်ပါဦး။
၂. သင့်ကံကြမ္မာကို သင့်ဘာသာ စီရင်ပါ
ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ပီဇာဆိုင်ထက် အင်တာနက်နဲ့ အလုပ်လုပ်သူတွေက ငွေပိုရနေတာကို သတိထားမိလာပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ပီဇာဆိုင်ကို ရောင်းပြီး web design သင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒိချိန်မှာ နည်းပညာလုပ်သား အရမ်းလိုအပ်နေတာကြောင့် အတွေ့အကြုံ မရှိပဲနဲ့တောင် DotCom မှာ အလုပ်ရခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် ကံကောင်းသွားတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမှန်နေရာမှန်ရောက်တာဟာ ကံကိုပဲ ပုံချနေလို့ မရပါဘူး။ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေအားလုံး ကံကြမ္မာ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုနဲ့ စပါတယ်။ အရေးကြီးတာက ကံကောင်းအောင် နေဖို့၊ ကိုယ့်ကံကို ကိုယ် ဖန်တီးဖို့ပါ။
၃. မီးသေ မသွားပါစေနဲ့
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ ကျွန်တော် အလုပ်ဝင်ပြီး လအနည်းငယ်အကြာမှာ နည်းပညာလုပ်ငန်း ထိုးကျခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီပြုတ်သွားပြီး ကျွန်တော့်ဘာသာ Web Design ဆွဲပေးတဲ့ လုပ်ငန်းလေး စခဲ့ရပါတယ်။ စားနိုင်သောင်နိုင်ရုံပဲ ရပါတယ်။
ပြောချင်တာက သင့်စိတ်ဆန္ဒကို မစွန့်လွှတ်ဖို့ပါပဲ။ အဲဒိဘဝမှာ ကျွန်တော်ဟာ အထေက်အကူဖြစ်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒိဘဝ လုပ်ငန်းအစဟာ အပြင်က ကြည့်ရင်တော့ ဒုံးပျံတက်သလိုပေမယ့် တကယ်တော့ ခက်ခဲပါတယ်။ လူတွေက ညတွင်းချင်း အောင်မြင်တယ် ပြောကြပေမယ့် ၁၂ နှစ်ကြာတဲ့ ညပါ။
၄. ဖြစ်ချင်တာကို နှစ်ဆတိုးလုပ်ပါ
၂၀၀၈ ခုနှစ်ကျ ကျွန်တော့်အသင်းဟာ Hootsuite လို့ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအတွက် Social Media Account တွေ အများကြီးကို တစ်နေရာထဲက ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ App တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမလအတွင်းပဲ လူ သိန်းနဲ့ချီပြီး Sign Up လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တခြား ပရောဂျက်တွေကို ဖြုတ်ပြီး ကျွန်တော့်မှာ ရှိသမျှ အားလုံးကို အဲ့ဒါထဲကို ပုံအောဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့ပါတယ်။
အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း အခက်အခဲကို အကြာကြီး လျှောက်လှမ်းပြီးနောက်မှာ အဲ့လို အဆုံးအဖြတ်ကာလလေးကို ရတတ်ပါတယ်။ သင်ကံကောင်းရင် သင် ဖြစ်ချင်တာကို နှစ်ဆမြန်မြန် ရောက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရတာပါ။
ဒါပေမယ့် နည်းနည်းတော့ စွန့်စားရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ် လုပ်ချင်တာ လုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက် မစွန့်စားလို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်လောင်းတွေအတွက် စွန့်စားတတ်ဖို့ အရမ်းလိုအပ်တာပါ။
၅. လုပ်ချင်တာနဲ့ လုပ်သင့်တာ ကြားကနေရာ
ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဲ့ဒိ App ဟာ ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီ ၁၀၀ အပါအဝင် လူ ၁၁ သန်းက သုံးနေပါပြီ။ ကျွန်တော့်ငယ်ဘဝ ကျွန်ပြူတာဂိမ်းတွေကို နှစ်သက်တဲ့ ရည်မှန်းချက်က ထင်မှတ်မထားတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ပြန်လည်လာတာပါ။
ပြောရရင် ငယ်ငယ်လေးထဲက ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်ချင်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်ဒီနေရာကို ရောက်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကောလိပ်မှာ ကွန်ပြူတာသိပ္ပံသင်မယ်။ အလုပ်ကောင်းကောင်းရမယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုဖြစ်မသွားတာပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က လုပ်ချင်တာနဲ့ လုပ်သင့်တာကြားက နေရာကို ရောက်သွားတာပါ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာရယ်၊ ငွေရဖို့ရယ် ရောစပ်နေတဲ့ ဝင်္ကပါထဲမှာ ကျွန်တော့်လို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လောင်းတွေ ဝဲလည်နေဆဲပါ။
” သင်လုပ်ချင်တာ လုပ်ပါ” လို့ပြောတာလောက်တော့ ကြားရ မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိနေရာတွေက လုပ်ငန်းရှင်လောင်းတွေကို အကြံပေးချင်ပါတယ်။ လုပ်ချင်တာ အမြဲမလုပ်နိုင်ပေမယ့် ဘယ်တော့မှ လုပ်ချင်တာကို မစွန့်လွှတ်လိုက်ပါနဲ့။ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်သင့်တာ ထိစပ်တဲ့နေရာမှာ အကြီးမားဆုံး အရာတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။